Tsiahy. 7 Febroary 2009, kianjan’ny 13 Mai (Jean Luce Randriamihoatra). Habibiana faratampony. | Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris
← CUA Antananarivo. Fepetra sy Fandaminana ho fanatsarana ny Tanana.
Blues music. →
Tsiahy. 7 Febroary 2009, kianjan’ny 13 Mai (Jean Luce Randriamihoatra). Habibiana faratampony.
Publié le 7 février 2017 par Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris
Jean-Luce Randriamihoatra. 7/02/2017.
#7febroary. TSIAHY …
Kianjan’ny 13 Mai. Teny Analakely, vavolombelon’ny zava-nitranga teny izahay …
… ny andron’ny 7 febroary 2009 maraina.
Talohan’ny nitarihana « Vahoaka » ho eny Ambohitsorohitra !
Ph. Jean-Luce Randriamihoatra
Rajoelina, Roindefo, Lylison, … Habibiana faratampony no nataony tamin’ny 7 febroary 2009
Valo taona androany ny « Sabotsy Mena” araka ny famaritan’ny mpiray Tanindrazana sasany azy ny 07 Febroary 2009. Sabotsy nanirahina sy nandrisihana ho any amin’ny faritra mena ireo tsy nahafantatra izay tena tetidratsy nokotrehan’ireo politisiana nitarika ny hetsika. Fangalana sy famerenana ny Lapam-panjakanan’Ambohitsorohitra ho an’ny vahoaka no nambaran’i Rajoelina Andry ary ny praiminisitra notendreny teo amin’ny Kianjan’ny 13 Mey no nasainy nitarika ireo « vahoaka » (raha azo faritana ho izany).
Tsy izay anefa no tetika satria nahafantatra tsara ireo mpitarika ireo fa tsy azo atao ary fahotana mahafaty ny manafika Lapam-panjakana kanefa efa maty paika avokoa ny dingana nandalovana. Ra ha ny famaritan’ny mpanara-baovao azy dia habibiana faratampony no nataon-dRajoelina sy ny forongony ny 7 febroary 2009 iny, anisan’izany Roindefo, Lylison, sy ny maro hafa,… araka ny efa fijoroana vavolombelona efa nataon’ny kolonely Charles Andrianasoavina. Izy ireo no tompon’antoka tamin’iny rà mandriaka teny Ambohitsorohitra iny, ary ny fahitalavitra Frantsay France 24 ihany koa dia manana porofo amin’izany, tsy avy ao an-dapa no nitifitra fa avy taty aorian’ireo nentina natao sorona teny Ambohitsorohitra.
Efa maty paika iny fitondrana olona hovonoina nataon-dRajoelina sy ny forongony iny. Ankoatra izany, natomboka tamin’ny « Alatsinainy Mainty » (26 Janoary 2009) ny tetika satria notafihana sy norobaina ny Onjampeom-pirenena (RNM) sy ny Fahitalavim-pirenena (TVM). Ry Ranjivason indray no tompon’antoka tamin’izany ary efa nogadraina teny Tsiafahy izy noho io fandorana ny RNM sy TVM io. An’ny vahoaka Malagasy tsy misy ankanavaka ireo ary ny mpiambina koa ireo fananam-pirenena ireo. Tsy mora ny niditra tao ary tsy maintsy voasava izay ho ao. Iaraha mahatadidy ireo politisiana nitarika ny hetsika. Niaraha nahita ihany koa fa nialohan’ny fandorana ireo fananam-pirenena ireo dia norobaina ny fitaovana maro tao ary azo sary avokoa ny solosaina sy ny hafa nobatain’ny olona, tsy henatra tsy tahotra.
Ny tena loza dia tsy mba teny an-toerana Rajoelina Andry fa dia nanome baiko sy nitsodrano tamin’ny fanatanterahana fa nihalangalana nahafahany nanilika andraikitra raha toa ka nisy ny fivadihan-javatra. Tsy ilaina asian-teny ny fandrobana sy ny fandorana tranom-barotra vaventy teny Ankorondrano sy ny Magro rehetra manerana ny Nosy ary ny MBS. Ministra mbola ao amin’ny fitondrana amin’izao no tompon’antoka tamin’izany.
Nisy ny maty sy ny naratra tamin’iny Sabotsy iny raha tsy hiresaka afa tsy ny tao amin’ny Trading Center izay nisy mpiarabelona lasa “maskita” sy ny tototry ny vary amin’ny gony teny amin’ny Magro Tanjombato. Misy porofo tsy azo lavina avokoa ireo tranga rehetra ireo. Tsy nisy anefa ny hetsiky ny fianakavian’ireny niharam-bohina ireny fa toy ny valala nosamborim-boka fotsiny izy ireny. Notarihana andian’olona izy ireny ary nandao azy ireny iretsy mpamporisika. Tsy tongatonga ho azy kosa ny 07 Febroary 2009 araka ny fijoroana vavolombelon’ilay manamboninahitry kolonely ao amin’ny tafika izay tena lohalaharana ihany koa tamin’ny fanonganam-panjakana ny volana Martsa 2009. “Tsy hahomby, hono, iny tolona iny raha tsy nisy rà latsaka”. Hitam-poko, hitam-pirenena fa tsy ny Mpiaro ny Filoha (Garde Presidentielle) tao Ambohitsrohitra no nitifitra ireo “sorona”. Mpanao gazety vahiny any ivelany no nametraka fanontaniana tao amin’ny onjampeo iray hoe: “à qui profite cette crime”? Tsy nahafantatra ny kononkonona teny Ambatobe tokoa ity mpanao gazety ity satria raha nanana voavao momba ny fivoriana teny izy dia nazava taminy ny raharaha. Nanamafy ihany koa ity mpanao gazety vahiny ity fa tsy avy tao amin’ny Lapam-panjakana velively ny fihavian’ny tifitra. Raha mba nanaiky ny fanakanana nataon’ilay jeneraly voatendry ho filohan’ny Filankevitra Ambonin’ny Tetezamita ireo nentanim-po (tsy fantatra ny antony) dia ho niverin-dalana.
Matoa nanaiky nandoa honitra ho an’ny fianakavian’ireo namoy ny ainy ny fitondrana tetezamita dia mazava ho azy fa nahatsiaro tomponandraikitra tamin’ny loza nanjo azy ireo izy. Porofon’izany ny tsy niraharahiany ireo maty tetsy amin’ny Trading Center sy ny teny amin’ny Magro Tanjombato. Ny praiminisitra voatendry tamin’izany moa dia tara vao tonga teny Ambohitsorohitra na dia nilaza aza fa saiky voatifitra. Raha ny marina anefa dia izy no tokony ho tonga voalohany teo amin’ny Lapam-panjakana ary nifandamina tamin’ireo nanao foloalindahy nanao sakana. Azo antoka mantsy fa tsy ho sahy nitifitra ireo efa niomana tamin’izany raha lohalaharana teny izy. Raha tsy efa tao anaty tetika fa izy no natao sorona satria hafa tokoa ny fipetraky ny toe-draharaha raha nisy nanjo ity manampahefana vao notendrena ity. Hanao ny fanamarihana ny faha valo taonan’ny 07 Febroary 2009 androany ny fikambanana AV7. Handringa ihany izany satria ny filohan’ny Repoblika IV sy ireo efa tandapa dia tsy hanatrika izany. Misy amin’ireo nafana fo tamin’iny “sorona” iny eny am-ponja sy misitri-belona kanefa dia samy niara-nitoto nahafotsy sy nahandro nahamasaka ihany.
Azo vinavinaina fa tsy ho voasakana ny olona efa niomana tamin’ny fandrobana raha toa ka tafiditra tao tokoa ireo tonga nirohatra teny. Izay no antony nitifirana azy ireo dieny mbola taty ivelany satria rehefa tao anatiny izy ireo dia nandiso ny teti-dratsin’ny manongam-panjakana nitady sorona izany. Araka ny vaovao amin’ny haino aman-jery dia efa aman-jatony ny fianakavian’ireo sorona no voaray ho mpiasam-panjakana. Tsy misy maharatsy izany kanefa sao dia zara aza nisy maty mba hiadanan’ny velona.
Andry Tsiavalona / http://gvalosoa.com
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué 7 Fevrier 2009 Madagascar, Jean Luce Randriamihoatra Photos, Rajoelina, Roindefo, Valosoa Gazety. Ajoutez ce permalien à vos favoris.